Dedicated server: zvakanakira bhizinesi rako | Kubva kuLinux
Isaac | | Networks / Maseva
Zvirokwazvo waona kuwanda kwenhau dzenyaya umo makambani anga achitengesa data revashandisi vavo kune vechitatu mapato, kana uko European mitemo yekuchengetedza data isina kutariswa sezvo vari vatorwa vekunze. Neichi chikonzero, mapurojekiti akadai seGAIA-X abuda, pamwe ne inotonhorera gore masevhisi nemaseva akazvipira uye chengetedzo kuchengetedza vatengi vako.
Aya makambani achaita inopa zvese zvaunoda, kunyangwe iwe uchida zvakapusa webhu yekubatira masevhisi ne Linux yakatsaurirwa server sekunge urikunyanya kuda uye unoda makomputa ekugona emahara eBig Data, Kudzidza Kwakadzika, nezvimwewo, asi pasina chikonzero chekuve nemitengo yedata repakati mune chivakwa.
1 Chii chinonzi server yakatsaurirwa?
1.1 Nei uchisarudza server yakatsaurirwa?
1.2 Chii chandingaite naye?
2 Nzira yekusarudza yakatsaurwa sevha?
Chii chinonzi server yakatsaurirwa?
Un yakatsaurwa server, Icho chiri chimiro chemuviri server iyo iwe yaunogona kushandisa zvizere uye zvakasarudzika. Ndokunge, haisi mhinduro yakagovaniswa kana chidimbu uchishandisa VPS (Virtual Yakavanzika Server) kugovera zviwanikwa zvemhando yepamusoro pakati pevatengi vanoverengeka.
Nei uchisarudza server yakatsaurirwa?
Iyi mhando yekuzvipira ine zvimwe zvinobatsira zvakajeka pamusoro peVPS:
Kana iwe uchida kugona kwakakwira, mhando iyi yehunyanzvi yakachipa ichienzaniswa neVPS.
Ukashaikwa nematanho ehunyanzvi, unogona kushandisa zviwanikwa zvehardware zvakananga uye zvega, zvinovandudza mashandiro.
Yakakwira bandwidth kune avo vanoda yakakwira data traffic, uye ine yekukurumidza TTFB.
Kusimba uye kugadzikana nekuzvipira.
Kuchinja uye kugona kuyera zviwanikwa.
Ndinoreva sei kuve neyako dhata data, asi pasina mitengo yekuwana mhando yezvivakwa kana matambudziko ekugadzirisa uye ekugadzirisa. Chete nekuhaya sevhisi uye kutanga kushandiswa kwayo nekukasira.
Chii chandingaite naye?
Kune akawanda masevhisi uye vanopa evanozvipira maseva, senge French kambani OVHcloud. Ese aya masevhisi evashandi vanopa zvakasiyana siyana kune avo vatengi, uye nezvinangwa zvakasiyana, zvichizadzisa zvese zvido. Semuyenzaniso:
Kukurumidza: Ndiro basa rakareruka, kune vanoita mahara kana makambani madiki ari kutsvaga webhu saiti, kungave webhusaiti yebasa ravo, blog, faira server, webapps (senge ERP bhizinesi maapplication, CRM, nezvimwewo), kune e-commerce zvitoro, etc.
chengetedzo: aya ndiwo akasarudzika makore ekuchengetedza masevhisi ane akakwirira kwazvo masimba mune dzimwe nguva, uye nemukana wekusarudza Ultra-inokurumidza NVMe SSD yakaoma dhiraivha. Iwe unogona kushandisa aya akatsaurwa ekuchengetedza maseva ekuchengetedza dhatabhesi, mabhakuki, akagoverwa kuitisa, nezvimwe.
Gaming: Kana iwe uchida kugadzira yako yega sevha yemavhidhiyo emavhidhiyo kana kutenderera, iwe unogona kutarisira kune iyi mhando yeakazvitsaurira server, nezvose zvaunoda zvemhando idzi dzezvishandiso zviri zvakadaro mazuva ese nhasi. Semuenzaniso, kugona kushandisa Minecraft server.
Infrastructure: maseva akasimba kwazvo akazvitsaurira kumakambani makuru, mayunivhesiti, uye zvimwe zvinhu zvinoda hukuru hwemakomputa, bandwidth, rutsigiro rwehardware rwekuona, uye masimba ekurangarira akakwirira.
KukarukuretaMamwe maseva akazvitsaurira anonyanya kupihwa simba kuti ape akakwira komputa kugona. Izvi zvakakosha kana uchiedza kumhanyisa software ine yakakwira masvomhu mutoro, senge sainzi simulation uye kuverenga, Big Data, Machine Kudzidza, nezvimwe.
Nzira yekusarudza yakatsaurwa sevha?
Kusarudza yakakodzera yakatsaurwa server Izvo hazvina kunyanya kuomesa basa, kunyanya nematanho chaiwo uye akapusa aripo parizvino anopiwa nevatapi. Nekudaro, kana iwe uchida zvimwe zvakawanda, iwe unofanirwa kuteerera kune anotevera mapoinzi:
CPU- Iwe unofanirwa kugara uchifunga nezvesimba remagetsi iwe raunoda pachinangwa chako. Semuenzaniso, zvewebhu kubata, hazvidi kuti uve nesimba rakanyanya, asi zvinofanirwa kune mamwe maapplication esainzi.
RAM: seiyo CPU, kumhanya kwayo, latency uye kugona, iko kuita kwako kwakatsaurwa server system kunoenderana.
Self Storage- Iwe unowana mhinduro dzakasiyana, senge HDD kana SSD kune yako yakatsaurwa server. Izvo zvakakosha kusarudza tekinoroji yakakodzera kwazvo zvinoenderana nezvaunoda, neNMVe SSD ndiyo inokurumidza. Zvakare haufanire kukanganwa kugona kwacho kuti kukwane pane zvauri kutsvaga.
Operating systemGNU / Linux masisitimu anowanzo shandiswa mukusimba kwavo, chengetedzo, uye kugadzikana, mukuwedzera kune kwavo rezinesi remahara. Nekudaro, mazhinji maVPS kana akazvitsaurira maseva masevhisi zvakare anopawo mukana wekuve neWindows Server kana iwe uchida kushandisa chaiwo mapurogiramu.
Ancho de banda: Iwe unofanirwa kuve nehanya neyakaganhurwa yekuchinjisa dhata inoiswa neiyi mhando yebasa, nekuti kana uine traffic yakawanda, ungatofanira kuhaya mhinduro ine risingaperi upamhi kana kumusoro.
GDPR: Izvo zvakakosha kuti uzive kuti mupi weEuropean, senge OVHcloud, inogona kunge iri imwe sarudzo yakanaka kana iwe uchida kumanikidza mutemo weEuropean dziviriro yedata, chinova chivimbo kune mamwe asiri eEuropean masevhisi.
Pamusoro peaya mapoinzi, mamwe masevhisi anopa mamwe matekinoroji ekuchengetedza, otomatiki mabhakiti, nezvimwe. Rudzi urwu rwese rwe zvimwe vanogamuchirwa nguva dzose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Networks / Maseva » Dedicated server: zvakanakira bhizinesi rako